नेपाली चलचित्रमा नयाँ नायिका |
नेपाली चलचित्रमा नयाँ नायिका
नेपाली चलचित्रका निर्देशकहरू केही वर्षअघिसम्म नायिकाको अभाव छ भन्थे । करिश्मा मानन्धर, गौरी मल्ल, पूजा चन्द आदि नायिका बिदेसिनु तथा विपना थापा, सज्जा मैनाली जस्ता केही नायिकाले विवाह गर्नुले निर्देशकका यी भनाइ सत्य पनि लाग्थे । आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नाटकीय परिवर्तन हुँदै नायिकाको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । दुई वर्षबीचमा श्वेता खड्का, ममता प्रधान, भावना गुरुङ, जेनिसा केसी, जुनु अर्याल, सभ्यता गिरी, स्नेहा शर्मा, यातना कार्की, उषा रजक, जिया केसी आदि नायिका रजतपटमा प्रवेश गरेपछि नेपाली चलचित्रमा नयाँ अनुहारको संख्या बढेको हो । यी नायिकाहरूमा कसले वर्चस्व्ा जमाउँछन् वा कसले नम्बर वानको मुकुट पहिरिने हुन् त्यो त समयले नै बताउनेछ । यी नायिकाहरू भन्दा अघि विपना थापा, रेखा थापा, ऋचा घिमिरे, सञ्चिता लुइँटेल, निरुता सिंह आदि आफ्नो फरक-फरक प्रस्तुतिका कारण दर्शकमाझ अमिट छाप छोड्न सफल भैसकेका छन् ।
.लो र सानोपर्दामा उत्तिकै व्यस्त नायिका सुषमा कार्कीर्लाई तीतो सत्य टेलिचलचित्रले छिट्टै परिचित गरायो । चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ’ बाट अभिनयको क्षेत्रमा अघि बढेकी सुषमा सुरुमा मोडलका रूपमा चिनिन्थिन् । र्‍याम्पमा क्याटवाक गर्ने क्रममा आत्मविश्वास बढ्दै गएपछि उनी चलचित्रप्रति आकषिर्त हुँदै गएकी हुन् । उनी नायिकाका साथै टेलिभिजन कार्यक्रम संचालिका पनि हुन् । आफूमा आत्मविश्वास भएकाले पहिलो पटक क्यामेराअगाडि उभिँदा नर्भस नभएको र आफूले यसलाई साधारण रूपमा लिएको सुषमा बताउँछिन् । सुषमाले गुरु दक्षिणा तथा तिमी मेरो म तिम्रोमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । उनले दिलीप रायमाझीको चलचित्र बाटोमुनिको फूलमा पनि नायिकाका रूपमा अभिनय गर्ने भएकी छिन् । एउटी सफल नायिकामा अभिनय, नृत्यका साथसाथै चरित्र र बानी-व्यवहार पनि राम्रो हुनुपर्ने सुषमा बताउँछिन् । सानो छँदा नेपाली सेनामा जाने सपना बुनेकी सुषमालाई भविष्यमा नायिकाका रूपमा परिचित भइएला भन्ने लागेको थिएन । साधारण युवतीबाट नायिकाका रूपमा परिचित हुँदा सबैले आफूलाई चिन्ने, आफ्ना प्रशंसकहरूले सल्लाह र सुझाव दिने कुराले खुसी लाग्ने भए पनि बाटोमा हिँड्दा जे पनि भन्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका कारण दिक्क लाग्ने सुषमा बताउँछिन् । पेसा बनाउने भन्दा रहरले यो क्षेत्रमा लागेकी सुषमाले चलचित्रमा निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेकी छैनन् । चलचित्र क्षेत्रमा आफूले काम गर्दासम्म सबैले वास्ता गर्ने तर काम गर्न नसक्दा कसैले वास्ता नगर्ने हुँदा उनलाई यो क्षेत्रमा भविष्य भएजस्तो लाग्दैन ।
चलचित्र कुसुमे रुमाल-२ बाट नायिकाका रूपमा देखापरेकी रुबी भट्टराई पनि अहिले
आफ्नो दोस्रो चलचित्रमा व्यस्त छिन् । उनी कुसुमे रुमालको छायांकन सकेर तिमी मेरो म तिम्रोको छायांकनमा व्यस्त भइन् । कलेज अध्ययन गरिरहेका बेला एडि्रन प्रधानको म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने प्रस्ताव आएपछि रुबीको अभिनययात्रा प्रारम्भ भएको हो । पहिलो पटक क्यामेराअगाडि उभिँदा रमाइलो अनुभव भएको बताउने रुबी चलचित्रको छायांकनमा पिकनिक गएको अनुभव गर्छिन् । यो क्षेत्रमा लागेका नायिकाहरूमा सुन्दरता, अभिनय क्षमता र नृत्यको राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । यी गुणको अभावमा कुनै पनि नायिकाले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । धेरैजसो नायिकाले यो क्षेत्रमा आउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको बताए पनि आफूलाई यो क्षेत्रमा लाग्न खासै गाह्रो नभएको रुबीको अनुभव छ । नायिका नभएको भए जागिरे जीवन बिताउने सोच बनाएकी रुबीले अभिनयलाई पेसाका रूपमा नलिएर सोखका रूपमा लिएकी छिन् । चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ नायिकाहरूबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण दिनरात परिश्रम गर्नुपर्ने भएकाले उनी आफ्ना कमजोरी हटाउन अभिनय प्रशिक्षण लिँदैछिन् । चलचित्र क्षेत्र बाहिर सुनेभन्दा बढी व्यवस्थित भएको अनुभव पनि उनले गरेकी छिन् ।
सफल मोडलका रूपमा परिचित हुने सपना देख्ने सोनिया केसीले यो सपना र्‍याम्प मोडलिङबाट पूरा गरिन्, अभिनय यात्रा भने कर्णदासको म्युजिक भिडियोबाट प्रारम्भ भयो । एयर होस्टेज बन्ने पारिवारिक दबाबका बाबजुद उनले ठूलीआमाको सहयोगले चलचित्र क्षेत्रमा पाइला बढाइन् । टेलिचलचित्र सिलसिलामा नायिकाको भूमिकामा अभिनय गरिसकेकी सोनियाले ठूलोपर्दामा पनि यही नामको चलचित्रमा अभिनय गर्ने मौका पाइन् । पहिलो चलचित्र सिलसिलाको सफलतापछि उनि दोस्रो चलचित्र कसलाई दिउ“m यो जोवनको छायांकनमा व्यस्त छिन् । सोनियाले चलचित्र क्षेत्र सोचेजस्तै पाएको तर खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले आफूलाई दिक्क बनाएको बताइन् । परिश्रम गर्नेहरूका लागि यो क्षेत्रमा भविष्य उज्ज्वल रहेको सोनियाको अनुभव छ । अभिनयलाई पेसा बनाउने लक्ष्य बोकेकी सोनियाले आफूलाई कुशल नायिकाका रूपमा स्थापित गराउन वसन्त श्रेष्ठसँग नृत्य तथा डकम्स फिल्म प्रा. लि.मा अभिनयसम्बन्धी तालिम लिएकी छिन् । करिश्मा मानन्धरको अभिनयबाट प्रभावित सोनियाले छनौट गरेर मात्र चलचित्रमा काम गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
मोडलिङ क्षेत्रमा स्थापित सोभिता सिंखडा पनि नवनायिकाको पंक्तिमा उभिएकी छिन् । पहिलो चलचित्र सन्देशबाट रजतपटमा देखिएकी सोभिताले हालसम्म गंगाजल, वीरताको चिनोजस्ता चलचित्रमा काम
गरिसकेकी छिन् । टेलिभिजनमा चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने क्रममा अभिनयको प्रस्ताव आएपछि उनी नायिका भएकी हुन् । एस.एल.सी. परीक्षा सकिन्ाासाथ मोडलिङसँग आबद्ध सोभिताले भविष्यमा यस्तो हुन्छु भन्ने सोच्ने अवसर नै नपाएको बताउँछिन् । संख्या र गुणस्तरमा वृद्धि हुन थालेपछि कलाकारले क्षमताअनुरूप काम पाउने वातावरण बन्दै गएको सोभिताको धारणा छ । नायिकामा नृत्य, अभिनय, अनुशासन र यो क्षेत्रलाई बुझ्न सक्ने गुण आवश्यक भएको सोभिता बताउँछिन् ।
मोडलिङबाट चलचित्र संसारमा प्रवेश गरेकी संजिता गुरुङले मोडलिङका क्रममा फोटोसेसन गराएकी थिइन् । त्यही तस्बिरका कारण उनलाई टेलिचलचित्र ‘बाटुली’ मा अभिनयको प्रस्ताव आयो । अहिले ठूलोपर्दाका चलचित्रमा व्यस्त संजिताले विज्ञापन तथा म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेकी छिन् । पहिलो चलचित्र हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ पछि उनले धुम, लभ स्टोरी २०६६ तथा बाबुलकी प्यार शीर्षकको भोजपुुरी चलचित्रमा काम पाइन् । पहिलोपटक क्यामेराअघि उभिँदा नर्भसनेसको अनुभव गरेकी संजितालाई आजभोलि निर्देशकले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो अभिनय गर्ने चाहना छ । पहिलोपटक आफूलाई पर्दामा देख्दा ठूलो मान्छे भएको अनुभव गरेकी संजितालाई केही समयमै यो क्षेत्रबाट धेरै कुरा सिक्न र गर्न बाँकी रहेको महसुस हुन थालेको छ । राजधानी कलाकेन्द्रबाट नृत्यको तालिम लिएकी संजिताले कुनै पनि क्षेत्र राम्रो नराम्रो हुनु आफूमा निर्भर रहने बताइन् । आजको युगमा अभिनय, नृत्य एवं सुन्दरताका साथै शिक्षित पनि भए चलचित्र क्षेत्रमा सफल हुन सकिने धारणा संजिताको छ । कान्तिपुर/नारी
« दीपिका नग्न कि अर्धनग्न ? कहाँ हराईन यी हिरोइन ? »